Al-Shabaab oo weerartay saldhig ciidan iyo jab xoog leh oo soo gaaray | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo weerartay saldhig ciidan iyo jab xoog leh oo soo gaaray
Ciidamada kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada dowladda degaanka Bariire gobolka Shabeelaha dhexe, halkaasoo jab xooggan uu kasoo gaaray.
BARIIRE, Soomaaliya - Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kumaandoosta Gorgor ayaa kahortagay weerar gaadmo ahaa oo kooxda Al-Shabaab saaka ku soo qaadeen saldhigyada degaanada Bariire iyo Awdheegle ee gobolka Shabeellada hoose.
Ciidamada weerarka soo qaaday ee Al-Shabaab ayaa jab xooggan lagu gaarsiiyey weerarkaas ay soo qaadeen waxaana lasoo bandhigay muuqaalada goobihii uu dagaalku ka dhacay oo ay yaalaan meydadka maleyshiyaadka kooxda Al-Shabaab.
Masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha hoose oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in wali ciidanku sii baacsanayaan qaar kamida raggii soo weeraray deegaanadaasi, inkastoo aan si rasmi ah loo soo gudbin tirada dadka lagu dilay iyo khasaaraha guud ee ka dhashay weerarkaasi.
Al-Shabaab ayaa ka geysta gudaha Soomaaliya weeraro gaadmo ah oo lagu qaado saldhigyada ciidamada, hotelada waa weyn, maqaayadaha caanka ah iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan ee magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka.